परमेश्‍वरको पवित्रता १
हाम्रो अन्तिम भेलामा हामीले परमेश्‍वरको अख्तियारको बारेमा थप सङ्‍गति गरेका थियौं। अहिले चाहिँ हामी परमेश्‍वरको धार्मिकताको विषयमा छलफल गर्नेछैनौं। आज हामी पूर्ण रूपमा नयाँ विषयको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं—परमेश्‍वरको पवित्रता। परमेश्‍वरको पवित्रता परमेश्‍वरको अद्वितीय सारको अर्को एउटा पक्ष हो, त्यसैले हामीले यो विषयका बारेमा सङ्‍गति गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। मैले यसभन्दा अघि परमेश्‍वरको सारको अर्का दुई पक्षहरू—परमेश्‍वरको धर्मी स्वभाव र परमेश्‍वरको अख्तियारको विषयमा सङ्‍गति गरेको थिएँ; के यी दुई पक्षहरू, र आज मैले सङ्‍गतिमा बताउने पक्ष सबै अद्वितीय हुन्? (हो।) परमेश्‍वरको पवित्रता पनि अद्वितीय छ, त्यसैले आजको हाम्रो सङ्‍गतिको निम्ति हाम्रो मुख्य विषयवस्तुमा यसको अद्वितीयताको आधार र मूल समावेश हुनेछ। आज हामी परमेश्‍वरको अद्वितीय सारको बारेमा छलफल गर्न जाँदैछौं—उहाँको पवित्रता। सायद तिमीहरूमध्ये कति जनामा शङ्का छ, र सोध्छौ, “किन हामीले परमेश्‍वरको पवित्रताको बारेमा सङ्‍गति गर्नुपर्छ?” चिन्ता नगर, म तिमीहरूलाई यसको बारेमा बिस्तारै बताउनेछु। मैले भन्‍नुपर्ने कुरा तिमीहरूले सुनिसकेपछि मैले यो विषयमा किन सङ्‍गति गर्नु अत्यावश्यक छ भनी तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ।
सर्वप्रथम, हामी “पवित्र” भन्‍ने शब्दलाई परिभाषित गरौं। तिमीहरूको अनुभूति र तिमीहरूले हासिल गरेका सबै ज्ञानबाट “पवित्र” शब्दको परिभाषा कस्तो हुनुपर्छ भनी तिमीहरू बुझ्छौ? (“पवित्र” को अर्थ दाग नलागेको, पूर्णतया मानवीय भ्रष्‍टता वा त्रुटिरहित। पवित्रताले सबै कुरालाई सकारात्मक तुल्याउँछ, चाहे त्यो विचारमा होस्, बोलीवचन वा कार्यमा होस्।) साह्रै राम्रो। (“पवित्र” ईश्‍वरीय, मानिसद्वारा दाग नलगाइएको, उल्‍लङ्घन गर्न नसकिने हुन्छ। यो अद्वितीय छ, यो परमेश्‍वरको मात्र हो र यो उहाँको चिन्ह हो।) यो तिमीहरूको परिभाषा हो। प्रत्येक व्यक्तिको हृदयमा यो “पवित्र” शब्दको एउटा क्षेत्र, एउटा परिभाषा र एउटा व्याख्या छ। कम्तीमा पनि, जब तिमीहरूले “पवित्र” भन्‍ने शब्द देख्छौ, तिमीहरूको मन खाली हुँदैन। तिमीहरूसँग यो शब्दको निम्ति एक निश्‍चित परिभाषाको क्षेत्र छ, र कतिपय मानिसहरूको भनाई परमेश्‍वरको स्वभावको सार परिभाषित गर्ने भनाइसँग लगभग मिल्छ। यो साह्रै राम्रो हो। “पवित्र” शब्द एक सकारात्मक शब्द हो भनी अधिकांश मानिसहरू विश्‍वास गर्छन्, र यो निश्‍चय नै सत्य हो। तर आज, हामीले परमेश्‍वरको पवित्रताको विषयमा सङ्‍गति गर्दा म केवल परिभाषाहरू र व्याख्याहरूको विषयमा मात्र कुरा गर्नेछैन। बरु, परमेश्‍वर पवित्र हुनुहुन्छ भनी मैले किन भन्छु, र परमेश्‍वरको सार वर्णन गर्न मैले किन “पवित्र” शब्द प्रयोग गर्छु भनी तँलाई देखाउन प्रमाणको रूपमा तथ्यहरूलाई प्रस्तुत गर्नेछु। हाम्रो सङ्‍गति सकिएपछि, परमेश्‍वरको सार परिभाषित गर्न र परमेश्‍वरको सन्दर्भमा “पवित्र” शब्द प्रयोग गर्नु न्यायोचित र सबैभन्दा उपयुक्त भएको तैँले महसुस गर्नेछस्। कम्तीमा पनि, वर्तमान मानव भाषाको सन्दर्भमा परमेश्‍वरको विषयमा उल्लेख गर्न यो शब्द प्रयोग गर्नु विशेष रूपमा उपयुक्त छ—मानव भाषाका सबै शब्दहरूमध्ये यो एउटै शब्द मात्र परमेश्‍वरको विषयमा उल्लेख गर्न पूर्णतया सुहाउँदो छ। जब परमेश्‍वरलाई जनाउनको निम्ति यो शब्द प्रयोग गरिन्छ तब यो रित्तो शब्द रहँदैन, न त यो आधारहीन प्रशंसा वा खोक्रो चापलुसीको शब्द नै हुन्छ। हाम्रो सङ्‍गतिको उद्देश्य प्रत्येक व्यक्तिलाई परमेश्‍वरको सारको यो पक्षको सत्यता पहिचान गर्न दिनु हो। परमेश्‍वर मानिसको बुझाइदेखि डराउनुहुन्‍न, तर उहाँ उसको गलत बुझाइदेखि डराउनुहुन्छ। परमेश्‍वरले प्रत्येक व्यक्तिले उहाँको सार, उहाँसँग के छ र उहाँ के हुनुहुन्छ भनी थाहा गरोस् भन्‍ने चाहना गर्नुहुन्छ। त्यसैले हरेक पटक जब हामी परमेश्‍वरको सारको पक्ष उल्लेख गर्छौं, तब परमेश्‍वरको सारको यो पक्ष पनि वास्तवमा अस्तित्वमा छ भनी मानिसहरूले देख्‍न सकून् भनी हामी थुप्रै तथ्यहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौं।
अब हामीसँग “पवित्र” भन्‍ने शब्दको परिभाषा छ, हामी केही उदाहरणहरू छलफल गरौं। मानिसहरूको धारणामा, तिनीहरूले थुप्रै कुराहरू र मानिसहरू “पवित्र” छन् भनी कल्‍पना गर्छन्। उदाहरणका लागि, कुमार केटाहरू र कन्या केटीहरूलाई मानवजातिको शब्दकोशहरूमा पवित्र भनी परिभाषित गरिन्छ। तर के तिनीहरू वास्तवमै पवित्र हुन्छन्? यो कथित “पवित्र” र आज हामीले गर्ने सङ्‍गतिमा कुरा गर्न लागेको “पवित्र” के एउटै र उही हो? (होइन।) असल नैतिकता भएका मानिसहरू जससँग परिष्‍कृत र सभ्य बोलीवचन छ, जसले कसैलाई कहिल्यै चोट पुर्‍याउँदैन, र तिनीहरूको बोलीवचनद्वारा अरूलाई सहज र सहमत तुल्याउँछ—के तिनीहरू पवित्र हुन्? असल काम गरी अरू मानिसहरूको भलाइ गर्ने र ठूलो सहायता पुर्‍याउने व्यक्तिहरू, अरू मानिसहरूको जीवनमा ठूलो आनन्द ल्याइदिने व्यक्तिहरू—के तिनीहरू पवित्र हुन्? स्वार्थी विचार नराख्‍ने व्यक्तिहरू, कसैलाई कठोर माग नगर्ने व्यक्तिहरू, प्रत्येक व्यक्तिप्रति सहिष्‍णुताको भाव राख्‍ने व्यक्ति—के तिनीहरू पवित्र हुन्? कहिल्यै पनि झगडा नगरेका वा अरूबाट कहिल्यै फाइदा नउठाएका व्यक्तिहरू—के तिनीहरू पवित्र हुन्? र अरूको भलाइको निम्ति काम गर्ने व्यक्तिहरू र हरेक किसिमले अरूलाई उन्‍नति गराउने व्यक्तिहरू—के तिनीहरू पवित्र हुन्? आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण बचत अरूलाई दान दिने र सरल जीवन यापन गर्ने, आफूसँगै कठोर व्यवहार गर्ने तर अरूसँग उदारतापूर्वक व्यवहार गर्ने व्यक्तिहरू—के तिनीहरू पवित्र हुन्? (होइनन्।) तिमीहरूका आमाहरूले कसरी तिमीहरूको हेरचाह गरेका थिए र हरेक किसिमले तिमीहरूको रेखदेख गरेका थिए त्यो कुरा तिमीहरू सबै जनालाई याद छ—के तिनीहरू पवित्र हुन्? तिमीहरूले प्रिय मानेर राखेका मूर्तिहरू, चाहे तिनीहरू प्रसिद्ध मानिसहरू, सेलिब्रेटीहरू हुन् वा ठूला मानिसहरू हुन्—के तिनीहरू पवित्र हुन्? (होइनन्।) अब हामी बाइबलमा उल्लेख गरिएका अगमवक्ताहरूलाई हेरौं जसले धेरै मानिसहरूलाई थाहा नभएका भविष्यसँग सम्बन्धित कुराहरू बताउन सक्षम थिए—के यी मानिसहरू पवित्र थिए? परमेश्‍वरको वचन र बाइबलमा उल्लेख गरिएका उहाँको कामका तथ्यहरूको विवरण उल्लेख गर्न सक्ने व्यक्तिहरू—के तिनीहरू पवित्र थिए? के मोशा पवित्र थिए? के अब्राहाम पवित्र थिए? (थिएनन्।) अय्यूबको विषयमा नि? के उनी पवित्र थिए? (थिएनन्।) अय्यूबलाई परमेश्‍वरले धर्मी जन भन्‍नुभएको थियो, तैपनि किन उनलाई समेत अपवित्र भनियो? के परमेश्‍वरको भय मान्‍ने र दुष्‍टलाई घृणा गर्ने मानिसहरू साँच्‍चिकै पवित्र होइनन् र? तिनीहरू पवित्र हुन् कि होइनन्? (होइनन्।) तिमीहरू अलिक अनिश्‍चित छौ, तिमीहरू जबाफको बारेमा निश्‍चित छैनौ, र तिमीहरू “होइन” भनी भन्‍न साहस गर्दैनौ, न त “हो” भन्‍न नै साहस गर्छौ, त्यसैले अन्तमा तिमीहरू अर्ध-हृदयले “होइन” भन्छौ। म अर्को प्रश्‍न सोध्छु। परमेश्‍वरका सन्देशवाहकहरू—परमेश्‍वरले पृथ्‍वीमा पठाउनुभएका सन्देशवाहकहरू—के तिनीहरू पवित्र हुन्? के स्वर्गदूतहरू पवित्र हुन्? (होइनन्।) शैतानद्वारा भ्रष्‍ट नतुल्याइएका मानिसहरू—के तिनीहरू पवित्र हुन्? (होइनन्।) तिमीहरू हरेक प्रश्‍नको जवाफ “होइन” भनी दिइरहेका छौ। केको आधारमा? तिमीहरू द्विविधामा परेका छौ, होइन त? किन स्वर्गदूतहरूलाई पनि पवित्र छैन भनिन्छ? तिमीहरू अहिले अनिश्‍चित भएको महसुस गर्छौ, होइन त? यसभन्दा अघि उल्लेख गरिएका मानिसहरू, वस्तुहरू वा सृष्‍टि नगरिएका थोकहरू के कुराको आधारमा पवित्र होइनन् त्यसलाई तिमीहरू पत्ता लगाउन सक्छौ? म निश्‍चित छु कि तिमीहरूले पत्ता लगाउन सक्दैनौ। त्यसैले, के तिमीहरूले “होइन” भनी भन्‍नु अलिकति गैरजिम्मेवारी होइन र? के तिमीहरूले अन्धाधुन्ध जवाफ दिइरहेका छैनौ र? कतिपय मानिसहरूले यस्तो विचार गरिरहेका छन्: “तपाईंले पहिले नै यस किसिमले प्रश्‍न गर्नुभएको कारण जवाफ निश्‍चय नै ‘होइन’ भन्‍ने हुन्छ।” मलाई सरल जवाफ नदेओ। जवाफ “हो” हुन्छ कि “होइन” हुन्छ होशियारसाथ विचार गर। तलको विषयमा हामीले सङ्‍गति गरिसकेपछि जवाफ किन “होइन” रहेछ भनी तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ। म तिमीहरूलाई केही समयपछि जवाफ दिनेछु। सुरुमा, हामी पवित्र-शास्‍त्रबाट वचन पाठ गरौं।
मानिसलाई यहोवा परमेश्‍वरको आज्ञा
स्‍त्रीलाई सर्पको प्रलोभन
उत्पत्ति ३:१-५ अब सर्प यहोवा परमेश्‍वरले बनाउनुभएको भूमिको कुनै पनि पशुभन्दा धेरै धूर्त थियो। अनि त्यसले स्‍त्रीलाई भन्यो, हो, के परमेश्‍वरले बगैँचाको हरेक रूखबाट तैँले खानु हुँदैन भनी भन्‍नुभएको छ? अनि स्‍त्रीले सर्पलाई भनी, हामीले बगैँचाका रूखहरूबाट फल खान सक्छौँ: तर परमेश्‍वरले भन्नुभएको छ, बगैँचाको बीचमा भएको रूखबाट तैँले खानु हुँदैन, न त तैँले यसलाई छुनु नै हुन्छ, नत्र तँ मर्छस्। अनि सर्पले स्‍त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू निश्‍चय नै मर्नेछैनौ: तिमीहरूले त्यसबाट खाएको दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ अनि असल र खराब जानेर तिमीहरू परमेश्‍वरजस्तै हुनेछौ भन्ने परमेश्‍वर जान्नुहुन्छ।
यी दुईवटा वचन-खण्डहरू बाइबलमा भएको उत्पत्तिको पुस्तकबाट लिइएका हुन्। के तिमीहरू सबै यी दुई वटा वचन-खण्डहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ? यिनीहरू सुरुमा भएको घटनासँग सम्बन्धित छन्, जुन बेला मानिसलाई पहिलो पटक सृष्‍टि गरिएको थियो; यी घटनाहरू वास्तविक थिए। यहोवा परमेश्‍वरले आदम र हव्वालाई कस्तो किसिमको आज्ञा दिनुभएको थियो भनी पहिला हेरौं; यो आज्ञामा भएको विषयवस्तु आजको हाम्रो विषयको निम्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। “अनि यहोवा परमेश्‍वरले मानिसलाई आज्ञा गर्दै यसो भन्नुभयो, तैँले बगैँचाको हरेक रूखबाट स्वतन्त्र रूपमा खान सक्छस्: तर असल र खराबको ज्ञानको रूखबाट तैँले खानु हुँदैन: किनभने तैँले त्यसबाट खाएको दिन तँ निश्‍चय नै मर्नेछस्।” यो वचन-खण्डमा मानिसलाई दिइएको परमेश्‍वरको आज्ञाको महत्त्व के हो? सर्वप्रथम, मानिसले के खान सक्छ, अर्थात्, विभिन्‍न प्रकारका रूखहरूका फलहरू खान सक्छ भनी परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्छ। त्यसमा कुनै खतरा वा विष छैन; सबै खान सकिन्छ र मानिसले चाहे जति चिन्ता र शङ्‍का नगरिकन स्वतन्‍त्रतापूर्वक खान सक्छ। परमेश्‍वरको आज्ञाको एउटा भाग यही हो। अर्को भागचाहिँ चेतावनी हो। यो चेतावनीमा, परमेश्‍वरले मानिसलाई असल र खराबको ज्ञान दिने रूखको फलचाहिँ उसले खानु हुँदैन आज्ञा दिनुहुन्छ। यदि उसले यो रूखबाट खायो भने के हुनेछ? परमेश्‍वरले मानिसलाई भन्‍नुभयो: यदि तैँले त्यसबाट खाइस् भने तँ निश्‍चय नै मर्नेछस्। के यी वचनहरू स्पष्‍ट छैनन् र? यदि परमेश्‍वरले तँलाई यो भन्‍नुभयो तर तैँले किन भनेर बुझिनस्, के तैँले उहाँको वचनलाई एउटा नियमको रूपमा लिन्छस् कि पालन गर्नैपर्ने आज्ञाको रूपमा लिन्छस्? यस्तो वचन पालन गरिनु नै पर्छ, पर्दैन त? तर मानिस आज्ञापालन गर्न सक्षम होस् कि नहोस्, परमेश्‍वरको वचन स्पष्‍ट छ। परमेश्‍वरले मानिसलाई उसले के खानुहुन्छ र के खानुहुँदैन, र उसले खान नहुने फल खायो भने के हुनेछ भनी स्पष्‍टसँग बताउनुभयो। परमेश्‍वर बोल्‍नुभएको यी संक्षिप्‍त वचनमा, के तँ परमेश्‍वरको स्वभावको कुनै कुरा देख्‍न सक्छस्? के परमेश्‍वरका यी वचनहरू सत्य छन्? कुनै छल छ? कुनै झूट छ? कुनै त्रास छ? (छैन।) परमेश्‍वरले ईमानदारसाथ, सत्यतापूर्वक र सच्‍चारूपले मानिसलाई उसले के खानुहुन्छ र के खानुहुँदैन भनी बताउनुभयो। परमेश्‍वरले स्पष्‍ट रूपमा र सरल रूपमा बोल्‍नुभयो। के यी वचनहरूमा कुनै गुप्‍त अर्थ छन्? के यी वचनहरू सीधा छैनन्? के अनुमान गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छ? (छैन।) अनुमान गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। तिनीहरूको अर्थ एक झलकमै स्पष्‍ट हुन्छ। ती पढेपछि तिनीहरूको अर्थ पूर्णतया स्पष्‍ट भएको महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैले, परमेश्‍वरले भन्‍न चाहनुभएको र उहाँले व्यक्त गर्न चाहनुभएको कुरा उहाँको हृदयबाट आउँछ। परमेश्‍वरले व्यक्त गर्नुहुने कुराहरू सफा, सीधा र स्पष्‍ट छन्। कुनै गुप्‍त अभिप्रायहरू हुँदैनन्, न त कुनै गुप्त अर्थहरू नै हुन्छन्। उहाँ मानिससँग प्रत्यक्ष रूपमा बोल्‍नुहुन्छ, उसले के खानुहुन्छ र के खानुहुँदैन भनी उसलाई बताउनुहुन्छ। भन्‍नुको अर्थ, परमेश्‍वरका यी वचनहरूद्वारा, परमेश्‍वरको हृदय पारदर्शी र सत्य छ भनी मानिसले देख्‍न सक्छ। यहाँ झूटको कुनै पनि निशाना छैन; खान योग्य खानेकुरा तैँले खानुहुँदैन भनी तँलाई बताउन खोजिएको होइन, वा तैँले खान नहुने खानेकुरा “खा अनि के हुन्छ हेर्” भनी तँलाई बताउन खोजिएको होइन। परमेश्‍वरले यस्तो भन्‍न चाहनुभएको होइन। परमेश्‍वरले आफ्नो हृदयमा जे कुरा सोच्‍नुहुन्छ, उहाँले त्यही कुरा बताउनुहुन्छ। यदी परमेश्‍वर पवित्र हुनुहुन्छ किनकि यी वचनहरूमा उहाँले आफैलाई देखाउनुहुन्छ र प्रकट गर्नुहुन्छ भनी म भन्‍छु भने एउटा सानो ढिस्कोलाई पहाड बनाएको हुन्छु वा मैले चाहिनेभन्दा बढी कुरालाई अगाडि बढाएको हुन्छु भन्‍ने तँलाई लाग्‍नसक्छ। यदि त्यसो हो भने चिन्‍ता नगर्; हामीले अझै सिध्याएका छैनौं।
अब हामी “सर्पले स्‍त्रीलाई देखाएको प्रलोभन” को विषयमा कुरा गरौं। सर्प को हो? (शैतान।) शैतानले परमेश्‍वरको छ हजार वर्षीय व्यवस्थापन योजनामा प्रतिभारको भूमिका निभाउँछ, र हामीले परमेश्‍वरको पवित्रताको विषयमा सङ्‍गति गर्दा त्यसको यो भूमिकाको बारेमा उल्लेख गर्नैपर्छ। म किन यसो भन्छु? यदि तँलाई शैतानको दुष्‍टता र भ्रष्‍टता थाहा छैन भने, यदि तँलाई शैतानको स्वभावको बारेमा थाहा छैन भने, तैँले कुनै पनि हालतमा पवित्रतालाई स्वीकार गर्न सक्‍नेछैनस्, न त वास्तवमा पवित्रता के हो भनी जान्‍न नै सक्छस्। द्विविधामा, मानिसहरू शैतानले गरेको कार्य सही हो भनी विश्‍वास गर्छन्, किनकि तिनीहरू यस किसिमको भ्रष्‍ट स्वभावभित्र जिउँछन्। प्रतिभार नहुँदो हो त तुलना गर्नुको कुनै औचित्य हुँदैन, तैँले पवित्रता के हो भनी थाहा पाउन सक्दैनस्। त्यसैकारण यहाँ शैतानको बारेमा उल्लेख गरिनु नै पर्छ। यस किसिमले उल्लेख गर्नु व्यर्थ बातचित होइन। शैतानको बोली र कामहरूद्वारा हामी शैतानले कसरी काम गर्छ, शैतानले कसरी मानवजातिलाई भ्रष्‍ट तुल्याउँछ, र शैतानको स्वभाव र मुहार कस्तो छ भनी हामी हेर्नेछौं। त्यसो भए स्‍त्रीले सर्पलाई के भनिन्? यहोवा परमेश्‍वरले आफूलाई भन्‍नुभएको कुरा स्‍त्रीले सर्पलाई पुनः सुनाइन्। जब उनले यी वचनहरू भनिन्, तब के परमेश्‍वरले उनलाई भन्‍नुभएको कुरा सत्य थियो भन्‍ने बारेमा उनी निश्‍चित थिइन्? उनी निश्‍चित हुन सकेकी थिइनन्, थिइन् त? भर्खरै नयाँ सृष्‍टि गरिएको एक व्यक्तिको रूपमा उनीसँग असल र खराबको भेद छुट्याउने क्षमता थिएन, न त उनलाई आफ्नो वरपर भएका कुनै पनि कुराहरूको नै अनुभूति थियो। उनले सर्पलाई भनेका कुराहरूका आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा परमेश्‍वरले भन्‍नुभएको वचन सही थियो भनी उनी आफ्नो हृदयमा निश्‍चित थिइनन् भन्‍ने थाहा हुन्छ; उनको स्वभाव यस्तो थियो। परमेश्‍वरको वचनप्रति स्‍त्रीको स्वभाव अनिश्‍चित किसिमको छ भनी जब सर्पलाई थाहा भयो, तब त्यसले भन्यो: “तिमीहरू निश्‍चय नै मर्नेछैनौ: तिमीहरूले त्यसबाट खाएको दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ अनि असल र खराब जानेर तिमीहरू परमेश्‍वरजस्तै हुनेछौ भन्ने परमेश्‍वर जान्नुहुन्छ।” के यो वचनभित्र कुनै समस्याग्रस्त कुरा छ? जब तिमीहरू यो वाक्य पढ्छौ तब के तिमीहरूले सर्पका अभिप्रायहरूलाई पत्ता लगाउन सक्छौ? ती अभिप्रायहरू के-के हुन्? (मानिसलाई परीक्षा गर्नु, पाप गर्न उनलाई बहकाउनु।) त्यसले यस स्‍त्रीलाई परीक्षा गर्न चाहन्थ्यो, परमेश्‍वरको वचन ध्यान दिनबाट उनलाई रोक्‍न चाहन्थ्यो। तर त्यसले यी कुराहरू प्रत्यक्ष रूपमा भनेन। त्यसैले, त्यो अति धूर्त हो भनी हामी भन्‍न सक्छौं। त्यसले आफ्नो भाव धूर्त र छली किसिमले व्यक्त गर्छ ताकि त्यो आफूले चाहेको उद्देश्यसम्म पुग्‍नको लागि, जुन कुरा त्यसले मानिसबाट गोप्‍य राखी आफ्नो मनभित्र गुनेर राख्छ—सर्पको धूर्तता यस्तो किसिमको छ। शैतानको बोल्‍ने र काम गर्ने तरिका सधैँ यस्तै रहिआएको छ। कुनै एक वा अर्को तरिकालाई सुनिश्‍चित नगरिकन त्यसले “मर्दैनौ” भनेर भन्छ। तर यो कुरा सुनेर अज्ञानी स्‍त्रीको हृदय विचलित भयो। सर्प प्रसन्‍न भयो, किनकि त्यसको वचनले त्यसले चाहेजस्तै प्रभाव पारेको थियो—सर्पको धूर्त अभिप्राय यस्तो थियो। साथै मानवजातिले चाहना गर्ने किसिमको प्रतिफल दिने प्रतिज्ञा गरेर त्यसले स्‍त्रीलाई प्रलोभनमा पारेर भन्यो, “तिमीहरूले त्यसबाट खाएको दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ अनि असल।” त्यसैले उनले विचार गरिन्: “मेरो आँखा खोल्‍नु भनेको राम्रो कुरा हो!” र त्यसपछि त्यसले अझ बढी लोभ्याउने कुरा भन्यो, जुन वचन मानिसलाई पहिले कहिल्यै पनि थाहा थिएन, सुन्‍नेहरूमाथि परीक्षाको ठूलो शक्ति चलाउने वचनहरू: “र खराब जानेर तिमीहरू परमेश्‍वरजस्तै हुनेछौ भन्ने परमेश्‍वर जान्नुहुन्छ।” के यी वचनहरू मानिसलाई प्रबल रूपमा लोभ्याउने किसिमका छैनन् र? यो कसैले तपाईंलाई यसो भनेको जस्तो हो: “तपाईंको अनुहारको आकार अचम्म किसिमको छ, तर तपाईंको नाकको चुच्चो अलि छोटो छ। यदि तपाईंले त्यसलाई सच्याउनुभयो भने त्यसपछि तपाईं विश्‍व-सुन्दरी बन्‍नुहुन्छ!” के यी शब्दहरूले पहिला कहिल्यै कस्‍मेटिक सर्जरी गर्ने विचार नगरेको व्यक्तिको हृदयलाई विचलित बनाउन सक्छ? के यी शब्दहरू लोभ्याउने किसिमका छैनन् र? के यो प्रलोभन तँलाई परीक्षामा पार्ने किसिमको छैन र? अनि के हो परीक्षा होइन र? (हो।) के परमेश्‍वरले यस्तो कुरा भन्‍नुहुन्छ? हामीले अहिले भर्खरै हेरेको परमेश्‍वरको वचनमा यस किसिमको कुनै सङ्‍केत पाइन्छ? (पाइँदैन।) के परमेश्‍वरले आफ्नो हृदयमा विचार गर्नुभएको कुरा भन्‍नुहुन्छ? के मानिसले उहाँका वचनहरूद्वारा परमेश्‍वरको हृदयलाई हेर्न सक्छ? (सक्छ।) तर जब सर्पले यी वचनहरू स्‍त्रीसँग बोले, तब के तैँले त्यसको हृदयलाई देख्‍न सकिस्? (सकिन।) मानिसको अज्ञानताको कारण मानिस सर्पको वचनद्वारा सजिलैसँग प्रलोभनमा परेको थियो, र सजिलैसँग धोखा खाएको थियो। के तँले शैतानका अभिप्रायहरूलाई देख्‍न सकिस्? के शैतानले भनेको कुरा पछाडिको उद्देश्यलाई तैँले देख्‍न सकिस्? के तैँले शैतानको धूर्त योजना र छललाई देख्‍न सकिस्? (सकिन।) शैतानको कुरा गर्ने तरिकाले कस्तो किसिमको स्वभावलाई प्रस्तुत गरेको छ? यी शब्दहरूद्वारा तैँले शैतानको कस्तो किसिमको मूल-स्वभावलाई देखेको छस्? के यो धूर्त छैन र? सायद तेरो अगाडि त्यो मुस्कुराउँछ, वा सायद त्यसले कुनै अभिव्यक्ति प्रकट गर्दैन। तर त्यसले आफ्नो हृदयमा आफ्नो उद्देश्य कसरी हासिल गर्ने भनी हिसाबकिताब गरी बस्छ, र तैँले त्यसको यही उद्देश्यलाई देख्‍न सक्दैनस्। त्यसले तँसँग गर्ने सबै प्रतिज्ञाहरू, त्यसले वर्णन गर्ने सबै फाइदाहरू त्यसको प्रलोभनका देखावटी कुराहरू हुन्। तँ ती कुराहरूलाई असल देख्छस्, त्यसैले तँ परमेश्‍वरले भन्‍नुभएको भन्दा त्यसले भनेको कुरा अझ बढी उपयोगी, अझ बढी महत्वपूर्ण भएको महसुस गर्छस्। जब यस्तो हुन्छ, तब के मानिस समर्पित कैदी बन्दैन र? के शैतानले प्रयोग गरेको यो रणनीति शैतानिक छैन र? तैँले आफैलाई पतनमा डुब्‍न दिन्छस्। शैतानले एउटा औँला पनि नहल्लाइकन तर यी दुई वटा वाक्यहरू मात्रै बोलेपछि तँ खुशीसाथ शैतानको पछि लाग्छस्, शैतानको पालन गर्न तयार हुन्छस्। यसरी शैतानको उद्देश्य पूरा भएको हुन्छ। के यो अभिप्राय दुष्‍ट छैन र? के यो शैतानको सबैभन्दा प्राचीन रूप होइन र? शैतानको वचनबाट मानिसले त्यसको दुष्‍ट अभिप्रायहरूलाई देख्‍न सक्छ, त्यसको घृणित रूप र त्यसको सार देख्‍न सक्छ। के यस्तै होइन र? कुनै विश्‍लेषण नै नगरिकन यी वाक्यहरूलाई तुलना गर्दा सायद तँलाई यहोवा परमेश्‍वरको वचन अल्छी लाग्दो, साधारण र तुच्छ लाग्छ होला, यहाँ ती वचनहरूले परमेश्‍वरको इमानदारीताको प्रशंसामा लयबद्ध गद्यात्मक कविता प्रवाह भएको आभास दिँदैन। तैपनि, जब हामी शैतानको वचन र शैतानको दुष्‍ट रूपलाई एक शत्रुको रूपमा स्वीकार गर्छौं, तब के परमेश्‍वरका यी वचनहरूले आजका मानिसहरूका निम्ति महत्वपूर्ण अर्थ बोक्दैन र? (बोक्छ।) यो तुलनाद्वारा मानिसले परमेश्‍वरको सिद्ध निर्दोषता महसुस गर्न सक्छ। शैतानले भन्‍ने हरेक वचन, साथै शैतानको अभिप्राय, उद्देश्य र त्यसले बोल्‍ने तरिका—ती सबै भ्रष्‍ट छन्। शैतानको बोल्ने तरिकाको मुख्य विशेषता के हो? शैतानले तँलाई आफ्‍नो नक्‍कलीपनलाई नदेखाइकन, लोभ्याउनको निम्ति शब्‍द-छलको प्रयोग गर्छ, न त त्यसको उद्देश्यको भेद छुट्याउने अवसर नै त्यसले तँलाई दिन्छ; शैतानले तँलाई बल्छीमा अल्झाउँछ, तर तैँले पनि त्यसका फाइदाहरूको प्रशंसा गर्नुपर्छ र गाउनुपर्छ। के यो शैतानको छल गर्ने आदतीय छनोट होइन र? (हो।) अब हामी शैतानको अरू कुन-कुन वचन र अभिव्यक्तिले त्यसको दुष्‍ट रूप मानिसलाई देखाउँछ भनी अवलोकन गर्नेछौं। हामी पवित्र-शास्‍त्रबाट थप केही वचन-खण्डहरू पढौं।
शैतान र यहोवा परमेश्‍वरका बीचमा संवाद
अय्यूब १:६-११ परमेश्‍वरका पुत्रहरू यहोवाको सामु उपस्थित हुन आउने दिन थियो, र शैतान पनि तिनीहरू सँगै आयो। अनि यहोवाले शैतानलाई भन्नुभयो, तँ कहाँबाट आइस्? तब शैतानले यसो भन्दै यहोवालाई जवाफ दियो, पृथ्वीमा यताउता हिँड्डुल गर्दै र तल माथि गर्दै आएँ। अनि यहोवाले शैतानलाई भन्नुभयो, के तैँले मेरो सेवक अय्यूबलाई विचार गरेको छस्, त्योजस्तो सिद्ध र सोझो, परमेश्‍वरको भय मान्ने र दुष्टताबाट दूर रहने पृथ्वीमा कोही पनि छैन? त्यसपछि शैतानले यहोवालाई जवाफ दियो र भन्यो, के अय्यूबले परमेश्‍वरको भय त्यत्तिकै मान्छ र? के तपाईंले तिनको वरिपरि, र तिनको घर वरिपरि, र तिनीसँग भएका सबै थोकलाई चारैतिरबाट बार हाल्नुभएको छैन र? तपाईंले तिनको हातका कामहरूमा आशिष्‌ दिनुभएको छ र तिनका धन-सम्पत्ति मुलुकभरि वृद्धि गर्नुभएको छ। तर अहिले तपाईंको हात पसार्नुहोस्, र तिनीसँग भएका सबै थोक छोइदिनुहोस् र तिनले तपाईंलाई सोझै सराप्‍नेछ।
अय्यूब २:१-५ फेरि परमेश्‍वरका पुत्रहरू परमप्रभुको सामु उपस्थित हुन आउने दिन थियो, र शैतान पनि तिनीहरूसँगै यहोवाको सामु आयो। अनि यहोवाले शैतानलाई भन्नुभयो, तँ कहाँबाट आइस्? तब शैतानले यसो भन्दै यहोवालाई जवाफ दियो, पृथ्वीमा यताउता हिँड्डुल गर्दै र तल माथि गर्दै आएँ। अनि यहोवाले शैतानलाई भन्नुभयो, के तैँले मेरो सेवक अय्यूबलाई विचार गरेको छस्, त्योजस्तो सिद्ध र सोझो, परमेश्‍वरको भय मान्ने र दुष्टताबाट दूर रहने पृथ्वीमा कोही पनि छैन? र त्यो अझै आफ्नो निष्ठामा दृढ छ, यद्यपि कुनै कारणविना नै त्यसलाई नष्ट पार्न तैँले मलाई त्यसको विरुद्धमा उक्साइस्। अनि शैतानले यहोवालाई जवाफ दियो र भन्यो, छालाको निम्ति छाला, हो, मानिसले आफ्नो जीवनको निम्ति आफूसँग भएको सब थोक दिनेछ। तर अहिले तपाईंको हात पसार्नुहोस् र त्यसको हाड र छालामा छोइदिनुहोस् अनि तिनले तपाईंलाई सोझै सराप्‍नेछ।
यी दुई वचन-खण्डहरूमा परमेश्‍वर र शैतान बीचको संवादको पूर्ण अंश पाइन्छ; यी वचन-खण्डहरूमा परमेश्‍वरले के भन्‍नुभयो र शैतानले के भन्यो भन्‍ने विवरण पाइन्छ। परमेश्‍वरले धेरै बोल्‍नुभएन, र उहाँले अति सरल रूपमा बोल्‍नुभयो। के हामी परमेश्‍वरको सरल वचनमा उहाँको पवित्रतालाई देख्‍न सक्छौं? कतिपयले यो सजिलोसँग गर्न सकिँदैन। के हामी शैतानको जवाफमा त्यसको घिनलाग्दो कुरा देख्‍न सक्छौं? (सक्छौं।) पहिले हामी यहोवा परमेश्‍वरले शैतानलाई कस्तो किसिमको प्रश्‍न सोध्‍नुभयो सो हेरौं। “तँ कहाँबाट आइस्?” के यो सीधा प्रश्‍न होइन? के यसमा कुनै गुप्‍त अर्थ छ? (छैन।) यो एउटा शुद्ध, कुनै पनि गोप्‍य अभिप्रायद्वारा भ्रष्‍ट नबनाइएको प्रश्‍न हो। यदि मैले तिमीहरूलाई सोध्नुपर्यो भने: “तँ कहाँबाट आइस्?” तिमीहरूले कसरी जवाफ दिनेथियौ? के यो जवाफ दिन गाह्रो प्रश्‍न हो? के तिमीहरूले यसरी जवाफ दिनेथियौ: “यताउता हिँड्डुल गर्दै र तल माथि गर्दै आएँ”? (दिने थिएनौ।) तिमीहरूले यस किसिमले जवाफ दिने थिएनौ। त्यसो भए, शैतानले यसरी जवाफ दिँदा तिमीहरूलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ? (शैतान मूर्ख तर छली भएको हामी महसुस गर्छौं।) मैले कस्तो महसुस गरिरहेको छु भनी तिमीहरूले बताउन सक्छौ? हरेक पटक जब म शैतानका यी वचनहरूलाई देख्छु, तब मलाई घृणाको महसुस हुन्छ, किनभने शैतान बोल्छ, तैपनि यसका वचनहरूमा कुनै सारतत्व हुँदैन। के शैतानले परमेश्‍वरको प्रश्‍नको जवाफ दियो? दिएन, शैतानले बोलेका शब्दहरूले जवाफ दिएन, ती शब्दहरूको केही अर्थ थिएन। ती परमेश्‍वरको प्रश्‍नका उत्तर थिएनन्। “पृथ्वीमा यताउता हिँड्डुल गर्दै र तल माथि गर्दै आएँ।” तैँले यी शब्‍दहरूबाट के बुझ्छस्? शैतान कहाँबाट आएको हो? के तिमीहरूले यो प्रश्‍नको जवाफ पाएका छौ? (छैन।) यही नै शैतानको धूर्त योजनाको “विशिष्ट प्रतिभा” हो—त्यसले वास्तवमा के भन्‍न खोजेको हो भनी पत्ता लगाउन कसैलाई दिँदैन। तैँले यी शब्दहरू सुनिसकेपछि पनि त्यसले के भन्‍न खोजेको हो भनी अझै छुट्याउन सक्दैनस्, यद्यपि त्यसले जवाफ भने दिइसकेको छ। तैपनि आफूले सिद्ध जवाफ दिएको छु भनी शैतानले विश्‍वास गर्छ। त्यसो भए तँ कस्तो महसुस गर्छस्? असन्तुष्टि? (हो।) अब तँ यी शब्दहरूको प्रत्युत्तरमा असन्तुष्टि महसुस गर्न थालिस्। शैतानले सीधै बोल्दैन तर तँलाई द्विविधामा पार्छ, त्यसका शब्दहरूको स्रोत पत्ता लगाउन असक्षम हुन्छस्। कहिलेकहीँ त्यसले जानाजानी बोल्छ, र कहिलेकहीँ त्यसले बोल्दा त्यसको शब्दहरूलाई त्यसको सारले, त्यसको आफ्नो स्वभावले नियन्त्रण गर्छ। यी शब्दहरू सीधै शैतानको मुखबाट आएका हुन्। शैतानले यी शब्दहरू लामो समयदेखि मनन गरेको थिएन वा त्यसले चलाकी पूर्वक यी शब्दहरू बोलेको थिएन; बरु, त्यसले स्वाभाविक रूपमा ती व्यक्त गर्‍यो। तैँले शैतानलाई तँ कहाँबाट आएको होस् भनी सोध्ने बित्तिकै, त्यसले यी शब्दहरूद्वारा जवाफ दिन्छ। तैँले धेरै अलमलिएको महसुस गर्छस्, शैतान कहाँबाट आएको हो भनी ठ्याक्‍कै थाहा हुँदैन। तिमीहरूका बीचमा यस्तै किसिमले बोल्‍ने कोही छन्? (छन्।) बोल्ने यो तरिका कस्तो हो त? (यो अस्पष्ट छ र यसले एक निश्‍चित जवाफ दिँदैन।) यस किसिमले बोल्‍ने तरिकालाई वर्णन गर्न हामी कस्ता शब्दहरूको प्रयोग गर्न सक्छौं? यो अनेकार्थी लाग्‍ने किसिमको छ र यो भ्रामक हुन्छ, होइन त? मानौं, यदि कसैले तिनीहरू हिजो कहाँ गएका थिए भनी अरूले थाहा नपाओस् भन्‍ने चाहन्छ। तैँले तिनीहरूलाई सोध्छस्: “मैले तपाईंलाई हिजो देखेको थिएँ। तपाईं कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो?” तिनीहरू हिजो कहाँ गएका थिए भनी तिनीहरूले तँलाई सीधा कुरा बताउँदैन। बरु, तिनीहरू भन्छन्: “हिजोको दिन कस्तो रमाइलो दिन थियो। त्यो अति धेरै थकाउने दिन थियो!” के तिनीहरूले तेरो प्रश्‍नको जवाफ दिए? तिनीहरूले दिए, तर तिनीहरूले तैँले चाहेको जवाफ दिएनन्। यो चाहिँ मानिसको बोलीको देखावटीपनको “विशिष्ट प्रतिभा” हो। त्यसको अर्थ के हो भनी तैँले कहिल्यै पत्ता लगाउन सक्दैनस्, न त त्यसको स्रोत नै तँलाई थाहा हुन्छ वा ती शब्दहरूको अभिप्राय नै थाहा हुन्छ। तिनीहरूले के कुरा लुकाउन खोजिरहेका छन् भनी तँलाई थाहा हुँदैन किनकि तिनीहरूको हृदयमा तिनीहरूको आफ्‍नै कथा हुन्छ—यो ढोंगीपन हो। के तिमीहरू पनि प्रायजसो यसरी नै बोल्छौ? (हो।) त्यसो भए तिमीहरूको उद्देश्य के हो? के कहिलेकहीँ तिमीहरूको आफ्‍ना चाहनाहरूलाई सुरक्षित राख्‍न, कहिलेकहीँ तिमीहरूको आफ्नो ओहदा कायम राख्‍न, तिमीहरूको छवि बचाउन, तिमीहरूका निजी जीवनका कुराहरू गोप्य राख्‍न, तिमीहरूको आफ्नो प्रतिष्‍ठा सुरक्षित राख्‍न हो? उद्देश्य जे-सुकै होस्, यो तिमीहरूका चाहनाहरूबाट अलग रहन सक्दैन, त्यो तिमीहरूका चाहनाहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। के यो मानिसको स्वभाव होइन र? के यस्तो किसिमको स्वभाव भएको व्यक्ति शैतानसँग सम्बन्धित भएको हुँदैन र? हामी यसलाई यसरी भन्‍न सक्छौं, के हामी सक्दैनौं र? सामान्यतया भन्‍नुपर्दा, यस्तो प्रकटीकरण घृणित र तिरस्कारयोग्य हुन्छ। तिमीहरूले पनि घृणित महसुस गर्छौ, गर्दैनौ त? (गर्छौं।)
फेरि एक पटक पहिलो वचन-खण्डलाई हेरौं, यसो भन्दै शैतानले यहोवाको प्रश्‍नको जवाफ दिन्छ: “के अय्यूबले परमेश्‍वरको भय त्यत्तिकै मान्छ र?” यहोवाले अय्यूबमाथि गरेको मूल्याङ्कनलाई शैतानले आक्रमण सुरु गरिरहेको छ, यो आक्रमण शत्रुताले भरिएको छ। “के तपाईंले तिनको वरिपरि, र तिनको घर वरिपरि, र तिनीसँग भएका सबै थोकलाई चारैतिरबाट बार हाल्नुभएको छैन र?” यो अय्यूबमाथि यहोवाको कामको बारेमा शैतानको बुझाइ हो र मूल्याङ्कन हो। शैतानले यसलाई यसरी मूल्याङ्कन गर्छ, र भन्छ: “तपाईंले तिनको हातका कामहरूमा आशिष्‌ दिनुभएको छ र तिनका धन-सम्पत्ति मुलुकभरि वृद्धि गर्नुभएको छ। तर अहिले तपाईंको हात पसार्नुहोस्, र तिनीसँग भएका सबै थोक छोइदिनुहोस् र तिनले तपाईंलाई सोझै सराप्‍नेछ।” शैतानले सधैँ अस्पष्ट रूपमा बोल्छ, तर त्यसले यहाँ भने निश्‍चित शब्दहरू प्रयोग गर्छ। तैपनि, यी शब्दहरू निश्‍चित अर्थमा बोलिएको भए तापनि त्यो यहोवा परमेश्‍वरमाथिको, अर्थात् परमेश्‍वर स्वयम्‌को विरुद्धमा एउटा आक्रमण, ईश्‍वर निन्दा र अवज्ञा हो। जब तिमीहरूले यी शब्दहरू सुन्छौ तब कस्तो महसुस गर्छौ? के तिमीहरूले घृणाको महसुस गर्छौ? के तिमीहरूले शैतानका अभिप्रायहरूलाई देख्‍न सक्छौ? सबैभन्दा पहिले, यहोवाले अय्यूबलाई गर्नुभएको मूल्याङ्कनलाई शैतानले खण्डन गर्छ—परमेश्‍वरको भय मान्‍ने र दुष्टलाई घृणा गर्ने एक मानिस। त्यसपछि शैतानले अय्यूबले भनेको र गरेको सबै कुराहरूको खण्डन गर्छ, अर्थात्, त्यसले यहोवाप्रति अय्यूबको भयलाई खण्डन गर्छ। के यो दोषयुक्त छैन? शैतानले यहोवाले गर्नुहुने र भन्‍नुहुने सबै कुरालाई दोष लगाउँदैछ, खण्डन गर्दैछ र शङ्‍का गर्दैछ। त्यसले विश्‍वास गर्दैन, त्यसले भन्छ, “यदि तपाईंले कुराहरू यस्ता छन् भन्‍नुहुन्छ भने, मैले चाहिँ कसरी देखिनँ छु? तपाईंले उसलाई त्यति धेरै आशिष् दिनुभएको छ, त्यसैले उसले कसरी तपाईंको भय नमान्‍न सक्छ र?” के यो परमेश्‍वरले गर्नुभएको सबै कामको खण्डन होइन र? दोष लगाउनु, खण्डन गर्नु र ईश्‍वर निन्दा—शैतानको शब्दहरू हमला होइनन् र? के यिनीहरू शैतानले आफ्नो हृदयमा विचार गरेका कुराहरूको साँचो अभिव्यक्ति होइनन् र? यी शब्दहरू निश्‍चय नै अहिले भर्खरै हामीले पढेका शब्दहरू जस्तै होइनन्: “पृथ्वीमा यताउता हिँड्डुल गर्दै र तल माथि गर्दै आएँ।” यिनीहरू पूर्णतया फरक छन्। यी शब्दहरूद्वारा शैतानले आफ्नो हृदयलाई पूर्णतया नाङ्गो पार्छ—परमेश्‍वरप्रति त्यसको स्वभाव र परमेश्‍वरप्रतिको अय्यूबको भयप्रति त्यसको घृणा। जब यस्तो हुन्छ, त्यसको द्वेष र दुष्‍ट स्वभाव पूर्णतया प्रकट हुन्छ। त्यसले परमेश्‍वरको भय मान्‍ने मानिसहरूलाई घृणा गर्छ, दुष्‍टलाई घृणा गर्ने मानिसहरूलाई घृणा गर्छ, र मानिसलाई आशिष् दिनुभएको कारण यहोवालाई पनि घृणा गर्छ। त्यसले अय्यूबलाई विनाश गर्न, उसलाई बरबाद गर्न यो मौका प्रयोग गर्न चाहन्छ, जसलाई परमेश्‍वरले आफ्नो हातले उठाउनुभएको थियो, त्यसले भन्छ: “तपाईं भन्‍नुहुन्छ अय्यूबले तपाईंको भय मान्छ र दुष्‍टलाई घृणा गर्छ। म यसलाई फरक ढङ्गले हेर्छु।” त्यसले यहोवालाई उक्साउन र परीक्षा गर्न थुप्रै माध्यमहरू प्रयोग गर्छ र थुप्रै चाल चल्छ ताकि यहोवाले अय्यूबलाई शैतानले चाहेको जस्तै चालवाजी गर्न, हानी पुर्‍याउन र दुरुपयोग गर्न शैतानको हातमा सुम्पिदिनुभएको होस्। त्यसले परमेश्‍वरको दृष्‍टिमा धर्मी र सिद्ध ठहरिएको यस मानिसलाई नाश गर्न यो मौकाको फाइदा उठाउन चाहन्छ। के शैतानमा यस्तो किसिमको हृदय हुनुको कारण केवल क्षणिक आवेग मात्रै हो? होइन, यो त्यसो होइन। यो लामो समयदेखिको योजना हो। परमेश्‍वरले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ, परमेश्‍वरले एक व्यक्तिलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, यो व्यक्तिलाई हेरचाह गर्नुहुन्छ, र त्यसै समयमा शैतानले उहाँको हरेक पाइलामा समस्या खडा गर्छ। परमेश्‍वरले जसलाई कृपा गर्नुहुन्छ, शैतानले पनि त्यसलाई त्यसको पछि-पछि लागेर त्यसलाई हेरिरहन्छ। यदि परमेश्‍वरले यो व्यक्तिलाई चाहनुहुन्छ भने शैतानले परमेश्‍वरलाई बाधा दिन आफ्नो शक्ति लगाउन सबै कार्य गर्छ, परीक्षा, बाधा दिन र परमेश्‍वरले गर्नुहुने कामलाई बिगार्न गर्न विभिन्‍न दुष्‍ट चालहरू प्रयोग गर्छ, त्यसले आफ्नो गुप्‍त उद्देश्य हासिल गर्न यी सबै कार्य गर्छ। यो उद्देश्य के हो? परमेश्‍वरले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्राप्‍त गर्नुभएको त्यसले चाहँदैन; परमेश्‍वरले चाहनुभएको सबैलाई त्यसले आफ्नो बनाउन चाहन्छ, त्यो तिनीहरूमा बास गर्न चाहन्छ, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ, तिनीहरूलाई बसमा पार्न चाहन्छ, ताकि तिनीहरूले त्यसको आराधना गरून्, ताकि दुष्‍ट कार्य गर्नमा तिनीहरू पनि त्यससँग सहभागी होऊन्। के यो शैतानको दुष्‍ट चाल होइन र? तिमीहरू प्रायजसो भन्छौ, शैतान अत्यन्त दुष्‍ट छ, अत्यन्त खराब छ, तर के तिमीहरूले त्यसलाई त्यो देखेका छौ? तिमीहरूले केवल मानिस कति धेरै खराब छ भन्‍ने कुरा मात्रै देख्‍न सक्छौ। वास्तवमा शैतान कति धेरै खराब छ भनी तिमीहरूले वास्तविकतामा देखेका छैनौ। तर यस विषयमा अय्यूबसँग सम्बन्धित घटनामा शैतानको दुष्‍टतालाई तिमीहरूले देखेका छौ? (छौं।) यो विषयले शैतानको घृणित मुहार र सारलाई स्पष्‍ट पारेको छ। परमेश्‍वरसँग युद्ध गर्ने क्रममा, र उहाँको पछि लाग्‍ने क्रममा, शैतानको उद्देश्य भनेको परमेश्‍वरले गर्न चाहनुभएको सबै कामलाई विनाश गर्नु, परमेश्‍वरले आफ्नो बनाउन चाहनुभएका मानिसहरूलाई कब्‍जा गर्न र नियन्त्रण गर्न, परमेश्‍वरले प्राप्त गर्न चाहनुभएकाहरूलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नु हो। यदि तिनीहरूलाई नष्ट गरिएन भने तिनीहरू शैतानको अधीनमा हुन्छन्, शैतानद्वारा प्रयोग गरिन्छन्—त्यसको उद्देश्य यही हो। अनि परमेश्‍वरले के गर्नुहुन्छ? परमेश्‍वरले यो वचन-खण्डमा एउटा सरल वाक्य मात्र भन्‍नुहुन्छ; परमेश्‍वरले गर्नुहुने कार्यको बारेमा थप कुनै कुराको विवरण उल्लेख गरिएको छैन, तर शैतानले गर्ने र भन्‍ने कुराहरूको विवरण प्रशस्त छन्। पवित्रशास्‍त्रको निम्‍न वचन-खण्डमा यहोवाले शैतानलाई सोध्नुहुन्छ, “तँ कहाँबाट आइस्?” शैतानको जवाफ के हो? (अझै पनि “पृथ्वीमा यताउता हिँड्डुल गर्दै र तल माथि गर्दै आएँ।”) अझै पनि उही वाक्य छ। यो शैतानको नारा, शैतानको बोलावट बनेको छ। यो कसरी हुन सक्छ? के शैतान घृणा योग्य छैन र? निश्‍चय नै यो घृणित वाक्य एक पटक उच्‍चारण गर्नु नै पर्याप्‍त छ। किन शैतानले यो बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्छ? यसले एउटा कुरालाई प्रमाणित गर्छ: शैतानको स्वभाव अपरिवर्तनीय छ। शैतानले आफ्नो कुरूप अनुहार लुकाउन ढोंगीपनको प्रयोग गर्न सक्दैन। परमेश्‍वरले त्यसलाई प्रश्‍न सोध्नुहुन्छ र त्यसले यसरी प्रत्युत्तर दिन्छ। त्यसैले, कल्पना गर्नुहोस् त्यसले मानिसहरूसँग कसरी व्यवहार गर्छ! शैतान परमेश्‍वरसँग डराउँदैन, परमेश्‍वरको भय मान्दैन, र परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्दैन। त्यो परमेश्‍वरको सामने अस्वाभाविक रूपमा अहङ्कारी बन्‍ने, परमेश्‍वरको प्रश्‍नको जवाफ दिन उही शब्दहरू प्रयोग गर्ने, परमेश्‍वरको प्रश्‍नको बारम्बार उही जवाफ दिने, यो जवाफ प्रयोग गरी परमेश्‍वरलाई गोलमालमा पार्ने दुष्प्रयास गर्छ—योचाहिँ शैतानको कुरूप अनुहार हो। त्यसले परमेश्‍वरको सर्वशक्तिमान्‌तामा विश्‍वास गर्दैन, परमेश्‍वरको अख्तियारमा विश्‍वास गर्दैन, र निश्‍चय नै त्यो परमेश्‍वरको प्रभुत्वमा समर्पित हुन इच्छुक छैन। त्यो निरन्तर रूपमा परमेश्‍वरको विरुद्धमा रहन्छ, निरन्तर रूपमा परमेश्‍वरले गर्नुहुने सबै कामलाई आक्रमण गर्छ, परमेश्‍वरले गर्नुभएको सबै कामलाई विनाश गर्ने प्रयत्‍न गर्छ—यो नै त्यसको दुष्ट उद्देश्य हो।
अय्यूबको पुस्तकमा उल्लेख गरिएझैँ, शैतानले उच्‍चारण गरेका यी दुई वटा खण्डहरू र शैतानले गरेका कुराहरूले परमेश्‍वरको छ हजार वर्षीय व्यवस्थापनको योजना विरुद्ध त्यो खडा भएको कुरालाई प्रतिनिधित्व गर्छ—यहाँ शैतानको वास्तविक रङ्गलाई प्रकट गरिएको छ। के तैँले वास्तविक जीवनमा शैतानको वचन र कार्यहरूलाई देखेको छस्? जब तैँले ती देख्छस्, तँलाई ती कुराहरू शैतानले बोलेको जस्तो नलाग्‍न सक्छ, बरु ती कुराहरू मानिसले बोलेको हो भनी तैँले विचार गर्न सक्छस्। जब मानिसले यस्ता कुराहरू बोल्छ, के कुराको प्रतिनिधित्व हुन्छ? शैतानको प्रतिनिधित्व गरिएको हुन्छ। यदि तैँले त्यसलाई पहिचान गरिस् भने पनि, त्यो कुरा शैतानले नै बोलेको हो भनी तैँले थाहा पाउन सक्दैनस्। तर अहिले यहाँ शैतान आफैले के भनेको छ भन्‍ने कुरा तैँले स्पष्‍टसँग देखेको छस्। अहिले तँसँग शैतानको घृणित रूप र दुष्‍टताको स्पष्‍ट, सफा बुझाइ छ। के शैतानले बोलेका यी दुई वचन-खण्डहरू आज मानिसहरूलाई शैतानको प्रवृत्तिको विषयमा ज्ञान प्राप्‍त गर्न सहायता गर्ने कुरामा महत्वपूर्ण छन्? के आज मानवजातिले शैतानको घृणित रूप पहिचान गर्न, शैतानको मौलिक, साँचो चेहरा पहिचान गर्न यी दुई वचन-खण्डहरूलाई होशियारसाथ प्रयोग गर्न योग्य छन्? यसो भन्‍नु उपयुक्त नदेखिए तापनि, यसरी व्यक्त गरिएका यी वचनहरूलाई सही ठान्‍न सकिन्छ। वास्तवमा, यो विचारलाई मैले यसरी मात्रै व्यक्त गर्न सक्छु, र यदि तिमीहरूले यसलाई बुझ्‍न सक्छौ भने त्यो पर्याप्‍त छ। बारम्बार शैतानले यहोवाले गर्नुहुने कुराहरूलाई आक्रमण गर्छ, यहोवा परमेश्‍वरप्रति अय्यूबको भयको बारेमा त्यसले दोष लगाउँछ। शैतानले यहोवालाई थुप्रै माध्यमहरूबाट उक्साउने प्रयत्‍न गर्छ, त्यसले अय्यूबलाई परीक्षामा पारेको कुरालाई यहोवाले बेवास्ता गर्नुभएको होस् भनी त्यसले प्रयास गर्छ। त्यसैले त्यसका वचनहरूमा उक्साउने उच्‍च प्रवृत्ति पाइन्छन्। त्यसैले मलाई बताओ, शैतानले यी वचनहरू बोलिसकेपछि, शैतानले के गर्न चाहन्छ भनी के परमेश्‍वरले स्पष्‍टसँग देख्‍न सक्‍नुहुन्छ? (सक्‍नुहुन्छ।) परमेश्‍वरको हृदयमा, परमेश्‍वरले हेरचाह गर्नुभएको यो मानिस अय्यूब—परमेश्‍वरका यस सेवक, जसलाई परमेश्‍वरले धर्मी मानिस, सिद्ध मानिसको रूपमा लिनुहुन्छ—के उ यस किसिमको परीक्षामा खडा भइरहन सक्छ? (सक्छ।) किन परमेश्‍वर यस विषयमा त्यति निश्‍चित हुनुहुन्छ? के परमेश्‍वरले सधैँ मानिसको हृदयको जाँच गरिरहनुहुन्छ? (हो।) के शैतानले पनि मानिसको हृदय जाँच गर्न सक्छ? शैतानले सक्दैन। शैतानले तेरो हृदयलाई देख्‍न सके पनि, त्यसको दुष्‍ट प्रवृत्तिले त्यसलाई पवित्रता चाहिँ पवित्रता नै हो वा अपवित्रता चाहिँ अपवित्रता नै हो भनी विश्‍वास गर्न दिँदैन। दुष्‍ट शैतानले पवित्र, धार्मिक वा उज्ज्वल कुरालाई कहिल्यै पनि मूल्यवान् ठान्‍न सक्दैन। शैतानले आफ्नो प्रवृत्ति, आफ्नो दुष्‍टता र आफ्नो आचरण बमोजिम काम गर्न कहिल्यै छोड्दैन। परमेश्‍वरद्वारा दण्ड वा विनाश सहनु परे तापनि जिद्दी बनेर परमेश्‍वरको विरोध गर्न त्यो पछि पर्दैन—यो दुष्‍टता हो, यो शैतानको स्वभाव हो। यो वचन-खण्डमा शैतान भन्छ: “छालाको निम्ति छाला, हो, मानिसले आफ्नो जीवनको निम्ति आफूसँग भएको सब थोक दिनेछ। तर अहिले तपाईंको हात पसार्नुहोस् र त्यसको हाड र छालामा छोइदिनुहोस् अनि तिनले तपाईंलाई सोझै सराप्‍नेछ।” मानिसले परमेश्‍वरबाट थुप्रै फाइदाहरू प्राप्‍त गरेको कारण मानिसले परमेश्‍वरको भय मानेको हो भनी शैतानले विचार गर्छ। मानिसले परमेश्‍वरबाट फाइदाहरू प्राप्‍त गर्छ, त्यसैले उसले परमेश्‍वर भलो हुनुहुन्छ भनी भन्छ। तर यो परमेश्‍वर भलो हुनुभएको कारण होइन, तर मानिसले थुप्रै फाइदाहरू प्राप्‍त गरेको कारणले गर्दा उसले यस किसिमले परमेश्‍वरको भय मान्‍न सक्छ। जब परमेश्‍वरले उसलाई यी सबै फाइदाहरूबाट वञ्‍चित गर्नुहुन्छ, तब उसले परमेश्‍वरले त्याग्छ। मानिसको हृदयले साँच्‍चिकै परमेश्‍वरको भय मान्‍न सक्छ भनेर आफ्‍नो दुष्ट स्वभावमा शैतानले विश्‍वास गर्दैन। त्यसको दुष्‍ट स्वभावको कारण त्यसलाई पवित्रता के हो सो थाहा छैन, भययोग्य आदर के हो भन्‍ने थाहा हुनु त परै जाओस्। परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्नु भनेको के हो वा परमेश्‍वरको भय मान्‍नु भनेको के हो भन्‍ने त्यसलाई थाहा छैन। त्यसलाई यी कुराहरू थाहा नभएको कारण, मानिसले पनि परमेश्‍वरको भय मान्‍न सक्दैन भनी त्यसले विचार गर्छ। मलाई भन्, के शैतान दुष्‍ट छैन र? हाम्रो मण्डली बाहेक अन्य थुप्रै धर्महरू र सम्प्रदायहरू, वा धार्मिक र सामाजिक समूहहरूले परमेश्‍वरको अस्तित्वमा विश्‍वास गर्दैन, न त परमेश्‍वर देहधारी हुनुभयो र उहाँले न्यायको काम गरिरहनुभएको छ भनी तिनीहरू विश्‍वास गर्छन्, त्यसैले तैँले विश्‍वास गरेको चाहिँ परमेश्‍वर हुनुहुन्‍न भनी तिनीहरू विश्‍वास गर्छन्। अनैतिक मानिसले आफ्नो वरपर हेर्छ र सबैलाई आफू जस्तै अनैतिक भएको देख्‍छ। झूटो बोल्‍ने मानिसले आफ्‍नो वरपर हेर्छ र बेइमान र झूट मात्र देख्छ। दुष्‍ट मानिसले हरेक व्यक्तिलाई दुष्‍ट नै देख्‍छ र उसले देखेका हरेक व्यक्तिसँग झगडा गर्न चाहन्छ। ईमानदारी व्यक्तिले हरेक व्यक्तिलाई ईमानदार नै देख्छ, त्यसैले तिनीहरूलाई सधैँ धोखा दिइन्छ, सधैँ ठगिन्छ, र त्यस विषयमा तिनीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन्। तिमीहरूलाई आफ्‍नो निश्‍चयतामा सुदृढ बनाउनका लागि मैले यी केही उदाहरणहरू दिएको छु: शैतानको दुष्‍ट स्वभाव क्षणिक बाध्यता होइन वा यो परिस्थितिहरूद्वारा निर्धारित हुँदैन, न त त्यो नै कारण वा प्रासंगिक तत्वहरूबाट उत्पन्‍न भएको अस्थायी प्रकटीकरण नै हो। बिलकुलै होइन! शैतानले यस्तो बन्‍ने बाहेक केही पनि गर्न सक्दैन! त्यसले कुनै पनि असल कुरा गर्न सक्दैन। यसले सुन्दा रमाइलो लाग्‍ने कुरा भन्दा समेत, केवल तँलाई लोभ्याउनको लागि यो भन्छ। जति धेरै रमाइलो लाग्छ, त्यति नै धेरै धूर्तता हुन्छ, त्यसको वचनहरू जति धेरै सुमधुर हुन्छन्, यी वचनहरूको पछाडि त्यति नै धेरै द्वेष र घृणित अभिप्राय लुकेको हुन्छ। शैतानले यी दुई वचन-खण्डहरूमा कस्तो किसिमको चेहरा र कस्तो किसिमको स्वभाव देखाउँछ। (ढोंगी, द्वेषपूर्ण र दुष्ट।) शैतानको प्राथमिक विशेषता दुष्‍टता हो; सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त शैतान दुष्‍ट र द्वेषपूर्ण छ।
अब हामीले शैतानको विषयमा रहेको हाम्रो छलफललाई सिध्याएका छौं, हामी हाम्रो परमेश्‍वरको विषयको कुराकानीमा फर्कौं। परमेश्‍वरको छ हजार वर्षीय व्यवस्थापन योजनाको अवधिमा, परमेश्‍वरले प्रत्यक्ष रूपमा बोल्‍नुभएको वचनमध्ये अत्यन्तै थोरै मात्र बाइबलमा उल्लेख गरिएको थियो, र बाइबलमा उल्लेख गरिएको वचन अत्यन्तै सरल छ। त्यसैले, हामी सुरुबाट आरम्भ गरौं। परमेश्‍वरले मानिसलाई सृष्‍टि गर्नुभयो र त्यसपछि परमेश्‍वरले मानिसको जीवनलाई निर्देशित गर्दै आउनुभएको छ। चाहे ती मानिसजातिलाई आशिष् दिने कार्य होस्, मानिसहरूका निम्ति व्यवस्था र आज्ञाहरू सृजना गर्ने काम होस्, वा जीवनको निम्ति विभिन्‍न नीतिहरू व्यवस्थापन गर्ने कार्य नै होस्, यी कार्यहरू गर्नुमा परमेश्‍वरको अपेक्षाकृत लक्ष्य के हो भन्‍ने तिमीहरूलाई थाहा छ? पहिलो, परमेश्‍वरले गर्नुहुने सबै कार्य मानवजातिको भलाइको निम्ति हो भनी के तिमीहरू निश्‍चयताका साथ भन्‍न सक्छौ? यो तिमीहरूका निम्ति भव्य, खोक्रो शब्दहरूजस्तो लाग्‍न सक्छ, तर त्यस भित्रको विस्तृत विवरण जाँच गर्ने हो भने, परमेश्‍वरले गर्नुहुने सबै कार्यको लक्ष्य मानिसलाई एक सामान्य जीवन जिउन अगुवाइ गर्नु वा मार्गदर्शन दिनु नै होइन र? चाहे मानिसलाई उहाँको व्यवस्था अनुसरण गर्न लगाउने होस् वा उहाँको व्यवस्था पालन गर्न लगाउने कुरा होस्, मानिस पतन भएर शैतानको आराधना गर्ने नहोस् र शैतानले उसलाई हानी नगरोस् भन्‍ने नै परमेश्‍वरको लक्ष्य हो; यो अत्यन्तै आधारभूत कुरा हो, र सबैभन्दा सुरुमा यही कुरा नै गरिएको थियो। सबैभन्दा सुरुमा, जब मानिसले परमेश्‍वरको इच्छा बुझेको थिएन, त्यो बेला परमेश्‍वरले केही सरल व्यवस्था र नियमहरू बनाउनुभयो र कल्पना गर्न सकिने सबै कुरा समावेश हुने नीति-नियमहरू बनाउनुभयो। यी नीति-नियमहरू सरल छन्, तैपनि तिनीहरूभित्र परमेश्‍वरको इच्छा समावेश छन्। परमेश्‍वरले मानवजातिलाई मूल्यवान् ठान्‍नुहुन्छ, स्‍नेह गर्नुहुन्छ र अत्यन्त धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। के त्यसै गर्नुहुन्छ होइन र? (हो।) त्यसो भए के हामी परमेश्‍वरको हृदय पवित्र छ भनी भन्‍न सक्छौं? के हामी उहाँको हृदय सफा छ भनी भन्‍न सक्छौं? (सक्छौं।) के परमेश्‍वरका कुनै थप अभिप्रायहरू छन्? (छैनन्।) के यो उहाँको लक्ष्य सही र सकारात्मक छ? (छ।) परमेश्‍वरको कामको प्रक्रियामा, उहाँले बनाउनुभएका सबै नीति-नियमहरूले मानिसमा सकारात्मक असर परेको छ, मानिसलाई अगुवाइ गरिरहेको छ। के परमेश्‍वरको मनमा आफूलाई कुनै स्वार्थी विचारहरू छन्? मानिसको सन्दर्भमा के परमेश्‍वरका अन्य कुनै थप लक्ष्यहरू छन्? के परमेश्‍वरले मानिसलाई कुनै किसिमले प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ? (चाहनुहुन्‍न।) अलिकति पनि छैन। परमेश्‍वरले जे भन्‍नुहुन्छ, त्यही गर्नुहुन्छ, र उहाँका वचनहरू र यहाँका कार्यहरू उहाँको हृदयमा भएका उहाँका विचारहरूसँग मिल्छन्। कुनै कलङ्कित उद्देश्य, कुनै स्वार्थी विचारहरू छैनन्। उहाँले गर्नुहुने केही पनि कुरा आफ्नो निम्ति होइन; उहाँले गर्नुहुने सबै कुरा उहाँले मानिसकै निम्ति गर्नुहुन्छ, कुनै पनि निजी उद्देश्यहरू हुँदैनन्। उहाँसँग उहाँले मानिसमाथि राख्‍नुहुने योजनाहरू र अभिप्रायहरू भए तापनि, ती कुनै पनि उहाँको आफ्नै निम्ति होइनन्। उहाँले गर्नुहुने सबै कुरा नितान्त रूपमा मानवजातिको निम्ति, मानवजातिको सुरक्षाको निम्ति, मानवजातिलाई गलत बाटोमा लाग्‍नबाट बचाउनको निम्ति गर्नुहुन्छ। के उहाँको यो हृदय बहुमूल्य छैन र? के तैँले शैतानमा यस किसिमको बहुमूल्य हृदयको सानोभन्दा सानो अंश समेत देख्‍न सक्छस्? तैँले शैतानमा यसको सानो अंश पनि देख्‍न सक्दैनस्। परमेश्‍वरले गर्नुहुने सबै कुरा स्वाभाविक रूपमा नै प्रकट हुन्छ। अब हामी परमेश्‍वरले काम गर्नुहुने तरिकालाई हेरौं; उहाँले आफ्नो काम कसरी गर्नुहुन्छ? के उहाँले यी नीति-नियमहरू र उहाँका वचनहरू लिएर हरेक मानिसको टाउकोमा कसिने गरी बाँधिदिनुहुन्‍छ, रबरले कुनै कुरालाई कसेर बाँधे झैँ[क] ती नीति-नियमहरू हरेक मानवजातिमाथि थोपर्नुहुन्छ? के उहाँले यस किसिमले काम गर्नुहुन्छ? (गर्नुहुन्‍न।) त्यसो भए उहाँले आफ्नो काम कसरी गर्नुहुन्छ? (उहाँले हामीलाई अगुवाइ गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सुझाव दिनुहुन्छ र उत्साह दिनुहुन्छ।) के उहाँले धम्की दिनुहुन्छ? उहाँ तिमीहरूसँग बोल्‍नुहुँदा के उहाँले तिमीहरूलाई तर्साउनुहुन्छ? (हुन्‍न।) जब तैँले सत्यतालाई बुझ्दैनस्, परमेश्‍वरले तँलाई कसरी अगुवाइ गर्नुहुन्छ? (उहाँले प्रकाश देखाउनुहुन्छ।) उहाँले तँमा प्रकाश देखाउनुहुन्छ, यो सत्यतासँग मेल खाँदैन भनी तँलाई बताउनुहुन्छ, अनि तैँले के गर्नुपर्छ भनी उहाँले बताउनुहुन्छ। परमेश्‍वरले काम गर्नुहुने यी तरिकाहरूबाट, परमेश्‍वरसँग तेरो कस्तो किसिमको सम्बन्ध छ भन्‍ने तँलाई लाग्छ? के परमेश्‍वर तेरो समझभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भन्‍ने तँलाई लाग्छ? (होइन।) परमेश्‍वरले काम गर्नुहुने तरिका देखिसकेपछि तँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? परमेश्‍वर तेरो अत्यन्तै नजिक हुनुहुन्छ; परमेश्‍वर र तेरो बीचमा कुनै दूरी छैन। जब परमेश्‍वरले तँलाई अगुवाइ गर्नुहुन्छ, जब उहाँले तँलाई जुटाउनुहुन्छ, तँलाई सहायता गर्नुहुन्छ र समर्थन गर्नुहुन्छ, परमेश्‍वर अनि उहाँले उत्प्रेरित गर्नुहुने भक्ति कति प्रिय छन् भन्‍ने तँ महसुस गर्छस्; तैँले उहाँ कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ सो महसुस गर्छस्, तैँले उहाँको न्यानोपनलाई महसुस गर्छस्। तर जब परमेश्‍वरले तेरो भ्रष्‍टताको निन्दा गर्नुहुन्छ, वा उहाँको विरुद्धमा बागी भएको कारण उहाँले तँलाई न्याय गर्नुहुन्छ र ताडना दिनुहुन्छ, तब उहाँले कुन विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ? के उहाँले तँलाई वचनहरूद्वारा निन्दा गर्नुहुन्छ? के उहाँले तँलाई तेरो वातावरणद्वारा र मानिसहरू, मामिलाहरू, र कुराहरूद्वारा ताडना दिनुहुन्छ? (हो।) परमेश्‍वरले तँलाई कुन हदसम्म ताडना दिनुहुन्छ? के परमेश्‍वरले मानिसलाई शैतानले हानी पुर्‍याउने हदसम्म नै अनुशासनमा राख्‍नुहुन्छ? (होइन। परमेश्‍वरले मानिसलाई उसले सहन सक्‍ने हदसम्म मात्र अनुशासनमा राख्‍नुहुन्छ।) परमेश्‍वरले भद्रता, कोमलता, प्रेमिलो र वास्ता पुर्‍याउने तरिकाले काम गर्नुहुन्छ, जुन असाधारण रूपमा होशियार र उचित किसिमको तरिका हो। उहाँको तरिकाले तँमा तीव्र भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्‍न गर्दैन, जस्तै: “परमेश्‍वरले मलाई यसो गर्न दिनुपर्छ” वा “परमेश्‍वरले मलाई त्यसो गर्न दिनुपर्छ।” परमेश्‍वरले तँलाई सहनै नसक्‍ने मानसिक वा भावनात्मक तीव्रता दिनुहुन्‍न जसले गर्दा असहनीय हुन्छ। के यस्तै होइन त? जब तैँले परमेश्‍वरको न्याय र सजायका वचनहरूलाई स्वीकार गर्छस् तब तैँले कस्तो महसुस गर्छस्? जब तैँले परमेश्‍वरको अख्तियार र शक्तिको अनुभूति गर्छस्, तब तैँले कस्तो महसुस गर्छस्? परमेश्‍वर ईश्‍वरीय र उल्लङ्‍घन गर्न नसकिने हुनुहुन्छ भन्‍ने महसुस गर्छस्? (हो।) के यस्ता समयहरूमा तँ र परमेश्‍वरको बीचमा दूरी भएको तँ महसुस गर्छस्? के तैँले परमेश्‍वरको भय महसुस गर्छस्? होइन—बरु तैँले परमेश्‍वरप्रति भयपूर्ण आदर महसुस गर्छस्। के परमेश्‍वरको कामको कारण मानिसहरूले यी सबै कुराहरू महसुस गर्दैनन् र? यदि काम गर्ने शैतान भएको भए के तिनीहरूले यी सबै कुराहरू महसुस गर्नेथिए? (थिएनन्।) परमेश्‍वरले मानिसलाई निरन्तर जुटाइरहन, मानिसलाई सहायता गर्न आफ्ना वचनहरू, आफ्नो सत्यता र आफ्नो जीवनलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। जब मानिस कमजोर हुन्छ, जब मानिसले निराश महसुस गर्छ, तब परमेश्‍वर निश्‍चय नै कठोर भएर बोल्‍नुहुन्‍न: “निराश महसुस नगर्। निराश हुनुपर्ने के कुरा छ र? किन तँ कमजोर छस्? कमजोर हुनुपर्ने कारण के छ र? तँ सधैँ यति कमजोर हुन्छस्, र तँ सधैँ नकारात्मक छस्। जीवित हुनुको अर्थ के छ र? गएर मर् र त्यसलाई सिध्याई दे!” के परमेश्‍वरले यस किसिमले काम गर्नुहुन्छ? (गर्नुहुन्‍न।) के परमेश्‍वरसँग यस किसिमले काम गर्ने अख्तियार छ? (छ।) तैपनि परमेश्‍वरले यस किसिमले काम गर्नुहुन्‍न। उहाँको सार, उहाँको पवित्रताको सारको कारण परमेश्‍वरले यस किसिमले काम गर्नुहुन्‍न। मानिसको निम्ति उहाँको प्रेम, उहाँले मानिसलाई बहुमूल्य ठान्नुहुने, र स्‍नेह गर्नुहुने कुरालाई एक वा दुई वाक्यहरूमा स्पष्‍टसँग व्यक्त गर्न सकिँदैन। यो मानिसको घमण्डले ल्याएको कुरा होइन तर यो त परमेश्‍वरले वास्तविक अभ्यासद्वारा ल्याउनुहुने कुरा हो; यो परमेश्‍वरको सारको प्रकाश हो। परमेश्‍वरले काम गर्नुहुने यी सबै तरिकाहरूबाट के मानिसले परमेश्‍वरको पवित्रतालाई देख्‍न सक्छ? परमेश्‍वरका असल अभिप्रायहरू लगायत, मानिसमा काम गर्ने परमेश्‍वरका चाहनाहरू लगायत, मानिसमा काम गर्न परमेश्‍वरले अपनाउनुहुने विभिन्‍न तरिकाहरू लगायत, उहाँले गर्नुहुने किसिमको काम लगायत परमेश्‍वरले काम गर्नुहुने यी सबै तरिकाहरूमा मानिसले के बुझेको उहाँ चाहनुहुन्छ—परमेश्‍वरका असल अभिप्रायहरूमा तैँले कुनै दुष्‍टता वा छल देखेको छस्? (छैन।) परमेश्‍वरले गर्नुहुने सबै कुरामा, परमेश्‍वरले भन्‍नुहुने सबै कुरामा, उहाँले आफ्नो हृदयमा विचार गर्नुहुने सबै कुरामा, साथै उहाँले प्रकट गर्नुहुने उहाँका सबै सार तत्त्वहरूमा—के हामी परमेश्‍वरलाई पवित्र भन्‍न सक्छौं? (सक्छौं।) के कुनै मानिसले संसारमा वा आफैभित्र यो पवित्रतालाई देखेको छ? के परमेश्‍वरबाहेक तैँले यसलाई कुनै मानवजाति वा शैतानमा देखेको छस्? (छैन।) यहाँ सम्मको हाम्रो छलफलको आधारमा के हामी परमेश्‍वरलाई अद्वितीय, पवित्र परमेश्‍वर स्‍वयम्‌ भनी भन्‍न सक्छौं? (सक्छौं।) परमेश्‍वरका वचनहरू, मानिसमा परमेश्‍वरले काम गर्नुहुने तरिका, मानिसलाई परमेश्‍वरले बताउनुहुने कुरा, मानिसलाई परमेश्‍वरले स्मरण गराउनुहुने कुरा, उहाँले दिनुहुने परामर्श र उत्साह लगायत परमेश्‍वरले मानिसलाई दिनुहुने सबै कुरा,—यी सबै कुरा एउटै सारबाट उत्पन्‍न हुन्छ: परमेश्‍वरको पवित्रता। यदि यस किसिमको पवित्र परमेश्‍वर नहुनुभएको भए कुनै पनि मानिसले उहाँले गर्नुहुने काम गर्न उहाँको स्थान लिन सक्‍ने थिएन। यदि परमेश्‍वरले यी मानिसहरूलाई पूर्ण रूपमा शैतानको हातमा सुम्पिदिनुभएको भए आज तिमीहरू सबै जना कस्तो अवस्थामा हुनेथियौ भनी के तिमीहरूले कहिल्यै विचार गरेका छौ? के तिमीहरू सबै जना यहाँ पूर्ण र सुरक्षित भएर बसिरहेका हुन्थ्यौ? के तिमीहरूले पनि यसो भन्थ्यौ: “पृथ्वीमा यताउता हिँड्डुल गर्दै र तल माथि गर्दै आएँ”? के तिमीहरू साहसी, सुनिश्‍चित र गर्वसाथ परमेश्‍वरको अगाडि विना लाज यस्तो वचनहरू बोल्‍न सक्थ्यौ? (सक्थ्यौं।) कुनै शङ्‍कै छैन, तिमीहरूले अवश्य नै यसो गर्नेथियौ! मानिसप्रति शैतानको प्रवृत्तिले मानिसलाई शैतानको स्वभाव र सार परमेश्‍वरको भन्दा पूर्ण रूपमा फरक छ भनी देख्‍न मानिसलाई सहायता गर्छ। शैतानको सारमा त्यस्तो के कुरा छ, जुन परमेश्‍वरको पवित्रताभन्दा विपरीत हुन्छ? (शैतानको दुष्‍टता।) शैतानको दुष्‍ट स्वभाव परमेश्‍वरको पवित्रताको विपरीत छ। अधिकांश मानिसहरूले परमेश्‍वरको प्रकाश र परमेश्‍वरको पवित्रताको यो सार तत्वलाई पहिचान गर्न नसक्‍नुको कारण के हो भने, तिनीहरू शैतानको अधिकार क्षेत्रमा, शैतानको भ्रष्‍टता र शैतानको घेराबन्दीमा जिउँछन्। तिनीहरूलाई पवित्रता भनेको के हो वा पवित्रताको परिभाषा कसरी दिने भन्‍ने थाहा छैन। तैँले परमेश्‍वरको पवित्रतालाई बुझे तापनि, तैँले यो परमेश्‍वरको पवित्रता हो भनी निश्‍चित रूपमा परिभाषित गर्न सक्दैनस्। यो परमेश्‍वरको पवित्रता सम्बन्धी मानिसको ज्ञानमा निहित असमानता हो।
अहिलेसम्मको तिमीहरूको जीवनलाई, तेरो विश्‍वासको सबै वर्षहरूमा परमेश्‍वरले तँमा गर्नुभएका सबै कामहरूलाई फर्केर नियाल्। यसले तँमा गहन भावनाहरू पैदा गरे पनि सतही भावनाहरू पैदा गरे पनि, के यो तेरो निम्ति सबैभन्दा आवश्यक कुरा होइन? के तैँले प्राप्त गर्नुपर्ने सबैभन्दा आवश्यक कुरा यही थिएन र? (हो।) के यो सत्य होइन? (हो।) के यो जीवन होइन? के परमेश्‍वरले कहिल्यै तँलाई प्रकाश दिएर उहाँले तँलाई दिनुभएका सबै कुराहरूका निम्ति तँबाट कुनै कुरा माग्‍नुभएको छ? (छैन।) त्यसो भए परमेश्‍वरको उद्देश्य के हो? परमेश्‍वरले किन यसो गर्नुहुन्छ? के परमेश्‍वरले तँमा बसोबास गर्ने उद्देश्य राख्‍नुभएको छ? (छैन।) के परमेश्‍वरले आफ्नो सिंहासन मानिसको हृदयभित्र बनाउन चाहनुहुन्छ? (हो।) त्यसो भए परमेश्‍वरले आफ्नो सिंहासन बनाउने र शैतानले बल पूर्वक कब्जा गर्ने कुराको बीचमा के भिन्‍नता छ? परमेश्‍वरले मानिसको हृदय प्राप्‍त गर्न चाहनुहुन्छ, उहाँ मानिसको हृदयमा बास गर्न चाहनुहुन्छ—यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ परमेश्‍वरले मानिसलाई आफ्नो कठपुतली, आफ्नो यन्त्र बनाउनु चाहनुहुन्छ भन्‍ने हो? (होइन।) त्यसो भए परमेश्‍वरको उद्देश्य के हो त? के परमेश्‍वरले मानिसको हृदयमा बास गर्न चाहनुहुने र शैतानले बल पूर्वक मानिसलाई कब्जा गरी त्यसको बनाउने कुराको बीचमा भिन्‍नता छ? (छ।) के भिन्‍नता छ? के तँ मलाई स्पष्‍टसँग बताउन सक्छस्? (शैतानले जबरजस्ती गर्छ भने परमेश्‍वरले मानिसलाई स्वेच्छामा छोड्नुहुन्छ।) के भिन्‍नता यही हो? परमेश्‍वरले तेरो हृदयलाई के गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ? परमेश्‍वर तँमा बास गर्नुको प्रयोग के हो? “परमेश्‍वर मानिसको हृदयमा बास गर्नुहुन्छ” भन्‍ने कुरालाई तिमीहरूले आफ्नो हृदयमा कसरी बुझ्छौ? परमेश्‍वरको विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा यहाँ हामी निष्पक्ष हुनैपर्छ, अन्यथा मानिसहरूले सधैँ गलत रूपमा मात्र बुझ्‍नेछन् र यस्तो विचार गर्नेछन्: “परमेश्‍वरले सधैँ मलाई अधीनमा राख्‍न चाहनुहुन्छ। उहाँले मलाई केको लागि अधीनमा राख्‍न चाहनुहुन्छ? म अधीनमा रहन चाहँदिनँ, मेरो मालिक म आफै बन्‍न चाहन्छु। तपाईं भन्‍नुहुन्छ, शैतानले मानिसहरूलाई अधीनमा राख्छ तर परमेश्‍वरले पनि मानिसहरूलाई अधीनमा राख्‍नुहुन्छ। के यो उस्तै कुरा होइन र? कसैले पनि मलाई अधीनमा राखेको म चाहँदिनँ। म आफै हुँ!” यहाँ के कुरा फरक छ? यसको बारेमा केही विचार गर। म तिमीहरूलाई सोध्छु, के “परमेश्‍वरले मानिसलाई अधीनमा राख्‍नुहुन्छ” भन्‍ने वाक्य खोक्रो वाक्यांश हो? के परमेश्‍वरले मानिसलाई अधीनमा राख्‍नुहुन्छ भन्‍नुको अर्थ उहाँ तेरो हृदयमा बास गर्नुहुन्छ र तेरो हरेक वचन र चाललाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्‍ने हो? यदि उहाँले तँलाई बस् भन्‍नुहुन्छ भने के तँ खडा हुने आँट गर्दैनस्? यदि उहाँले तँलाई पूर्वतिर जा भन्‍नुहुन्छ भने के तँ पश्‍चिमतिर जाने आँट गर्दैनस्? के “अधीनता” ले यस्तै भाव बुझाउँछ? (होइन, यस्तो बुझाउँदैन। परमेश्‍वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ, त्यस अनुसार मानिस जिएको उहाँ चाहनुहुन्छ।) परमेश्‍वरले यी वर्षहरूमा मानिसको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, मानिसमा उहाँको काम अहिलेसम्ममा अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ, उहाँले बोल्‍नुभएका सबै वचनहरूले मानिसमा कस्तो किसिमको प्रभाव होस् भन्‍ने अभिप्राय राखिएको छ? के यो मानिस परमेश्‍वरसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यस अनुसार जिउँछ भन्‍ने हो? “परमेश्‍वरले मानिसको हृदयमा बास गर्नुहुन्छ” भन्‍ने वाक्यको शाब्दिक अर्थलाई हेर्दा, परमेश्‍वरले मानिसको हृदय लिनुहुन्छ र त्यसमा बास गर्नुहुन्छ र उहाँ फेरि फर्कनुहुन्न जस्तो देखिन्छ; उहाँ मानिसको हृदयको मालिक बन्‍नुहुन्छ र उहाँले आफ्‍नो इच्छामा मानिसको हृदयलाई प्रभुत्व गर्न र आफू खुशी चलाउन सक्‍नुहुन्छ, ताकि परमेश्‍वरले उसलाई जे गर्न भन्‍नुहुन्छ, मानिसले त्यो गर्नैपर्छ। यस अर्थमा, प्रत्येक व्यक्ति परमेश्‍वर बन्छ र उहाँको सार र स्वभाव हासिल गर्छ भन्‍ने जस्तो देखिन्छ। त्यसैले यस सन्दर्भमा, मानिसले पनि परमेश्‍वरका कार्यहरू गर्न सक्छ? के “बास गर्नु” लाई यस किसिमले परिभाषित गर्न सकिन्छ? (सकिँदैन।) त्यसो भए यो के हो त? म तिमीहरूलाई यो सोध्छु: परमेश्‍वरले मानिसलाई दिनुहुने सबै वचनहरू र सत्यता के परमेश्‍वरको सार र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यसको प्रकाश हो? (हो।) यो निश्‍चय नै साँचो हो। तर के परमेश्‍वरले मानिसलाई दिनुहुने सबै वचनहरू उहाँ स्वयमले अभ्यास गर्नु र उहाँमा निहित हुनु अत्यावश्‍यक छ? यस विषयमा केही विचार गर। जब परमेश्‍वरले मानिसको न्याय गर्नुहुन्छ, किन उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ? यी वचनहरू कसरी अस्तित्वमा हुन आए? उहाँले मानिसको न्याय गर्नुहुँदा बोल्‍नुहुने यी वचनहरूको विषयवस्तु के हुन्? यी के कुरामा आधारित छन्? के यी वचनहरू मानिसको भ्रष्‍ट स्वभावमा आधारित छन्? (हो।) के परमेश्‍वरले गर्नुहुने मानिसको न्यायले परमेश्‍वरको स्वभावमा आधारित प्रभाव हासिल गरेको छ? (छ।) के “मानिसमा परमेश्‍वरको बास” एउटा खोक्रो वाक्यांश हो? निश्‍चय नै होइन। त्यसो भए किन परमेश्‍वरले मानिसलाई यी वचनहरू भन्‍नुहुन्छ? यी वचनहरू भन्‍नुमा उहाँको उद्देश्य के हो? के उहाँले यी वचनहरूलाई मानिसको जीवनको रूपमा उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ? (चाहनुहुन्छ।) परमेश्‍वरले यी वचनहरूमा बोल्‍नुभएको यो सत्यतालाई मानिसको जीवनको रूपमा कार्य गर्न प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। जब मानिसले यो सत्यता र परमेश्‍वरको वचनको सबै कुरा ग्रहण गर्छ र तिनीहरूलाई आफ्नो जीवनमा रूपान्तरण गर्छ, तब के त्यसपछि मानिसले परमेश्‍वरको आज्ञापालन गर्न सक्छ? के त्यसपछि मानिसले परमेश्‍वरको भय मान्‍न सक्छ? के त्यसपछि मानिसले दुष्‍टलाई घृणा गर्न सक्छ? जब मानिस यो अवस्थामा पुग्‍छ, के त्यसपछि मानिसले परमेश्‍वरको सार्वभौमिकता र व्यवस्थापनलाई पालन गर्न सक्छ? के त्यसपछि मानिस आफूलाई परमेश्‍वरको अख्तियारमा समर्पण गर्ने अवस्थामा हुन्छ? जब मानिसहरू अय्यूब वा पत्रुस जस्तै आफ्नो जीवनको अन्तिम अवस्थामा पुग्छन्, जब तिनीहरूको जीवन परिपक्‍वतामा पुगेको मान्‍न सकिन्छ, जब तिनीहरूसँग परमेश्‍वरको साँचो बुझाइ हुन्छ—के शैतानले अझै पनि तिनीहरूलाई बहकाउन सक्छ? के शैतानले अझै पनि तिनीहरूमा बास गर्न सक्छ? के अझै पनि शैतानले तिनीहरूलाई जबरजस्ती आफ्नो बनाउन सक्छ? (सक्दैन।) त्यसो भए यो कस्तो किसिमको व्यक्ति हो? के यो परमेश्‍वरले पूर्ण रूपमा आफ्नो बनाइसक्नुभएको व्यक्ति हो? (हो।) यो तहको अर्थमा, परमेश्‍वरले पूर्ण रूपमा आफ्नो बनाइसक्नुभएको व्यक्तिलाई तिमीहरू कसरी हेर्छौ? परमेश्‍वरको दृष्टिकोणबाट, यी परिस्थितिहरूमा, उहाँ यो व्यक्तिको हृदयमा अघिबाटै बास गर्नुभएको हुन्छ। तर यो व्यक्तिले कस्तो महसुस गर्छ? परमेश्‍वरका वचनहरू, परमेश्‍वरको अख्तियार, र परमेश्‍वरको मार्ग के यो मानिसभित्र जीवन बन्छ, अनि यो जीवनले मानिसको सम्पूर्ण अस्तित्वमा बास गर्छ, उसले जिउने जीवन र उसको सार परमेश्‍वरलाई सन्‍तुष्‍ट बनाउन पर्याप्‍त बन्छ? परमेश्‍वरको दृष्टिकोणबाट, के मानिसको हृदयमा यो क्षणमा उहाँ बास गर्नुभएको हुन्छ? (हुन्छ।) तिमीहरूले यो तहको अर्थलाई अहिले कसरी बुझ्छौ? के परमेश्‍वरको आत्मा तँमा बास गर्नुहुन्छ? (होइन। परमेश्‍वरको वचन हामीमा बास गर्नुहुन्छ।) परमेश्‍वरको मार्ग र वचन तेरो जीवन बनेको छ, र सत्यता नै तेरो जीवन बनेको छ। यो समयमा, मानिसले प्राप्‍त गरेको जीवन परमेश्‍वरबाट आएको हो, तर हामी यो जीवन परमेश्‍वरको जीवन हो भनी भन्‍न सक्दैनौं। अर्को शब्दमा, मानिसले परमेश्‍वरको वचनबाट प्राप्‍त गर्ने जीवनलाई हामी परमेश्‍वरको जीवन भन्‍न सक्दैनौं। मानिसले परमेश्‍वरलाई जति लामो समयदेखि पछ्याएको भए तापनि, मानिसले परमेश्‍वरबाट जतिसुकै वचन प्राप्‍त गरेको भए तापनि मानिस कहिल्यै पनि परमेश्‍वर बन्‍न सक्दैन। परमेश्‍वरले एक दिन “म तेरो हृदयमा बास गर्छु, अब तैँले मेरो जीवन प्राप्‍त गर्छौ” भनेर भन्‍नुभए तापनि, के तँ त्यसपछि परमेश्‍वर भएको महसुस गर्छस्? (होइन।) त्यसोभए तँ के बन्छस्? के तँमा परमेश्‍वरप्रति पूर्ण आज्ञापालन हुनेछैन? के तेरो हृदय परमेश्‍वरले तँलाई दिनुभएको जीवनले भरिपूर्ण भएको हुँदैन? परमेश्‍वरले मानिसको हृदयमा बास गर्नुभएपछि के हुनेछ भन्‍ने कुराको यो सामान्य प्रकटीकरण हुनेछ। यथार्थ यही हो। त्यसलाई यो दृष्टिकोणबाट नियाल्दा, के मानिस परमेश्‍वर बन्‍न सक्छ? जब मानिसले परमेश्‍वरका सबै वचनहरू प्राप्‍त गर्छ, जब मानिसले परमेश्‍वरको भय मान्छ र दुष्‍टलाई घृणा गर्छ, तब के मानिसले परमेश्‍वरको परिचय र सार हासिल गर्न सक्छ? (सक्दैन।) जे सुकै भए तापनि, यी सबै कुरा भनिसकेपछि र गरिसकेपछि पनि मानिस चाहिँ मानिस नै हो। तँ सृष्‍टि गरिएको प्राणी होस्; जब तैँले परमेश्‍वरबाट परमेश्‍वरको वचन प्राप्‍त गर्छस्, परमेश्‍वरको मार्ग प्राप्‍त गर्छस्, तैँले परमेश्‍वरको वचनबाट आउने जीवन मात्र प्राप्‍त गर्छस्, र तँ कहिल्यै पनि परमेश्‍वर बन्‍न सक्दैनस्।
अब हामीले भर्खरै छलफल गरेको विषयमा फर्कनेछौ। यो छलफलको अवधिमा, मैले तिमीहरूलाई प्रश्‍न सोधेँ—के अब्राहाम पवित्र हुन्? (होइन।) के अय्यूब पवित्र हुन्? (होइन।) यो “पवित्रता” मा परमेश्‍वरको सारतत्व हुन्छ। मानिससँग परमेश्‍वरको सारतत्व वा परमेश्‍वरको स्वभाव छैन। मानिसले परमेश्‍वरको वचनका सबै कुरा अनुभव गरिसकेको र तिनीहरूको वास्तविकताद्वारा सुसज्‍जित भइसकेको भए तापनि मानिसले कहिल्यै पनि परमेश्‍वरको पवित्र सारतत्वलाई प्राप्‍त गर्न सक्दैन; मानिस चाहिँ मानिस नै हो। तिमीहरू बुझ्छौ, हो? त्यसो भए अब यो वाक्यांशको बारेमा तिमीहरूको बुझाइ के छ: “परमेश्‍वरले मानिसको हृदयमा बास गर्नुहुन्छ”? (यो परमेश्‍वरको वचन, परमेश्‍वरको शैली र उहाँको सत्यता मानिसको जीवन बन्छ भन्‍ने हो।) तिमीहरूले यी वचनहरू कण्ठस्थ गरेका छौ। म आशा गर्छु कि तिमीहरूसँग गहन बुझाइ हुनेछ। कतिपय मानिसहरूले सोध्‍न सक्छन्, “परमेश्‍वरका सन्देशबाहक र स्वर्गदूतहरू पवित्र छैनन् भनी किन भन्‍नुहुन्‍छ?” यो प्रश्‍नको बारेमा तिमीहरू के विचार गर्छौ? सायद तिमीहरूले यसको बारेमा पहिले कहिल्यै विचार गरेका छैनौ। म एउटा सरल उदाहरण प्रयोग गर्नेछु: जब तैँले रोबर्टलाई चालू गर्छस्, तब त्यसले नाच्‍ने र बोल्‍ने दुवै गर्न सक्छ, अनि त्यसले के भन्‍छ भनी तैँले बुझ्छस्। तैँले त्यसलाई सुन्दर र जीवन्त छ भन्‍न सक्छस्, तर त्यसले बुझ्‍न सक्‍नेछैन किनकि त्यससँग जीवन छैन। जब तैँले त्यसको ऊर्जाको स्रोतलाई बन्द गर्छस्, के त्यो अझै हलचल गर्न सक्छ? जब यो रोबर्टलाई सक्रिय बनाइन्छ, तब तैँले त्यसलाई जीवन्त र सुन्दर देख्‍न सक्छस्। यो यथार्थ हो कि देखावटी हो भनेर तैँले त्यसको मूल्याङ्कन गर्छस्, तर चाहे जे सुकै होस्, तैँले त्यो हलचल गरिरहेको देख्छस्। तर जब तैँले त्यसको ऊर्जाको स्रोतलाई बन्द गर्छस्, तब के तैँले त्यसमा कुनै किसिमको व्यक्तित्व देख्छस्? के तैँले त्यसमा कुनै किसिमको सारतत्व भएको देख्छस्? मैले भन्‍न खोजेको कुराको अर्थलाई तैँले बुझ्छस्? अर्थात्, यो रोबर्ट हलचल गर्न सक्छ र रोकिन सक्छ, तैपनि तैँले त्यसमा कुनै किसिमको सारतत्व छ भनी कहिल्यै वर्णन गर्न सक्दैनस्। के यो यथार्थ होइन? अब, हामी यसको बारेमा थप कुराकानी गर्नेछैनौं। तिमीहरूसँग अर्थको सामान्य बुझाइ यतिसम्म भएमा पर्याप्‍त हुन्छ। हामी हाम्रो सङ्गतिलाई यहीँ अन्त्य गरौं। जयमसीह!
डिसेम्बर १७, २०१३
अघिल्लो: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु भनेको परमेश्‍वरको डर मान्‍नु र दुष्‍टताबाट अलग बस्नु हो